Peroa no firenena fahatelo indrindra any Amerika Atsimo, izay miisa ny faha-19 amin'ny firenena roa lehibe indrindra erantany. Teo amin'ny taonjato faha-12 talohan'i JK dia niforona ny fanjakana fahiny Inca. Ary tao amin'io faritany io dia nisy fitondram-panjakana iray teraka, izay naharitra hatramin'ny 1533, mandra-pandrain'ny Espaniôla. Ity firenena miafina ity dia malaza amin'ny zava-nitranga ara-tantara, izay maro no tsy voavaha hatramin'izao - ka aoka hianatra bebe kokoa amin'ny antsipiriany ny zava-misy mahaliana momba an'i Peru.
Zavatra tsy mahazatra sy mahaliana momba ny firenena Peroviana
Fombafomba sy fomban-drazana
Ny Peroviana dia afaka mamadika ny rantsantanany manodidina ny tempoliny mandritra ny resadresaka. Aza mieritreritra fa te hampahatezitra anao izy ireo - tsia, midika izany fa nihevitra ny toe-draharaha fotsiny ilay mpandray anjara.
Ireo Aborigènes dia miaina fa tsy dia mahomby, fa ilaina ny manamarika fa ny taham-pahaizana ara-literatiora dia ambony. Ny firenena dia nahazo fampianarana ambony ambaratonga faharoa ary mihoatra ny sivifolo isan-jaton'ny Peroviana no manana diplaoma.
Eo ambany herintaona ao amin'ny firenena dia misy fomban - drazana toy izany, raha fanomezana fanomezam-pahasoavana ho an'ny namana sy havana fialan-tsasatra dia hanome tavoahangy mavo. Inoana fa ny volo dia mitondra vintana tsara.
Ny rafi-pifidianana ao amin'ny firenena dia hentitra sy tsy maintsy ilaina. Ny olona valo ambin'ny folo taona dia tsy afaka mamoaka pasipaoro na mandà fitsaboana maro raha tsy mifidy.
Tany amin'ireo ala any Amazona, vao haingana tany Però no nisy ny foko Indianina iray tena izy, izay tsy nanameloka ny fisian'ny sivilizasiona. Ny toerana misy azy dia miafina tsara mba tsy hanakana azy ireo tsy ho velona. Io fanapahan-kevitra io dia nataon'ny governemanta niaraka tamin'ny filankevitra siantifika.
Ny firenena no laharana manaraka an'i India amin'ny fisian'ny maherifo mahery ao amin'izany. Eto izy ireo dia raisina amim-panajana sy hitsikilo ary matetika dia mitady fanampiana.
Ny kisoa guinein'i Cuy dia heverina ho sakafo nentim-paharazana. Misy toeram-pambolena sy fiompiana iray manontolo hananganana an'io biby io ary misy fomba maromaro hanomanana izany.
Any Chinche, any atsimon'i Però, ny mponina ao an-toerana dia afaka mahazo mihinana saka.
Amin'ity firenena ity ihany dia afaka manandrana zava-pisotro vita avy amin'ny sahona velona ianao. Heverina fa ity sakafo nasionaly ity dia manampy amin'ny fanafarana bwonchitis, asthma ary manatsara ny herin'ny lahy.
Peroa dia trano ahitana voankazo sy legioma mamy toy ny voatabia sy avocados.
Ao amin'ny fanjakan'i Però dia misy karazam-borona maro isan-karazany sy voajanahary. Ny sasany amin'izy ireo dia voarakitra ao amin'ny Boky Guinness Records, ny hafa kosa no lova Iraisin'ny UNESCO.
Ny Farihy Titicaca no farihy ambony avo indrindra eto an-tany. Ny heverina ho lehibe indrindra any Amerika Latina ihany koa.
Ny iray amin'ireo sehatra manan-danja indrindra ao amin'ny firenena dia mazava ho azy fa Machu Picchu . Izy io no renivohitry ny Inca fahiny, ny tahalin'ny tantara dia efa ho valo arivo taona.
Ny lalina indrindra manerana izao tontolo izao dia ny Cotahuasi (Kotauasi) canyon , izay ao amin'ny faritra Arequipa . Ny halaliny dia 3535 metatra - avo roa heny noho ny Grand Canyon malaza any Etazonia (1600 metatra).
Iray amin'ireo toerana tsy voavahavaha tety an-tany izao ny tanety Nazca . Eo amin'ny tany manontolo dia misy mazava, tsy misy hadisoana, tarehimarika. Ny tarehimarika hafahafa dia mampahatsiahy lalambe maro. Izany dia manolo-kevitra fa nolavin'ny fiaramanidina vahiny izy ireo.
Ao amin'ny tanànan'i Lima , renivohitr'i Però , manan-karena amin'ny fanatanjahantena , misy loharano tsy mahazatra, fa tsy ny rano avy amin'izany no manondraka vodka. Nandritra ny fisiany dia nisotro labiera mihoatra ny roa arivo litatra "rano fisotro" ny mpizaha tany.
Ny tanànan'i Cusco dia heverina ho manan-danja indrindra ao amin'ny empira ao Inca, niaro ny tranoben'ny sivilizasiona taloha ( Saksayuaman , Korikancha , Puka-Pukara sy ny maro hafa), izay mifanaraka amin'ny rafitry ny kolontsaina medaly. Ny tanàna iray manontolo no lovan'ny UNESCO.
Ny ala tropikaly dia misy roa ampahatelon'ny faritry ny firenena. Ao Però, misy mihoatra ny sivifolo sivinjato isan-karazany, noho izany ny firenena dia iray amin'ireo tsy manam-paharoa indrindra manerana izao tontolo izao.
Any Peru, 1625 ny karazam-borona amin'ny orkide dia mitombo, ary ny karazany 425 dia mitombo ao anatin'ny tontolo voajanahary eo akaikin'ny tanànan'i Machu Picchu malaza. Ao amin'ny iray amin'ireo trano fandraisam-bahiny ao Però , Hotel Inkaterra, no fanangonana betsaka indrindra any Amerika Latina. Misy karazany orkide 500 eo ho eo izy io.
Ao amin'ny Valam-pirenena ao Huascaran dia misy ny tampon'antso eo amin'ny tendron-tsambony miisa roa amby roapolo, izay avo mihoatra ny 6000 metatra ambonin'ny haabon'ny ranomasina. Ny avo indrindra dia El Huascarán, ny halavany dia 6768 metatra.
Saron'ny masoandro amin'ny tarehy avy amin'ny taonany
Fanandramana mikasika ny mastopathy
Bibikely miavaka amin'ny biby - karazana fitazonana sy fikarakarana
Ahoana no fomba handrafetana ny diary any am-pianarana?
Brad Pitt dia hanafosafo an'i Angelina Jolie noho ny fitandroana ny zaza
Nahoana no nandroaka ny zazakely rehefa avy nifoka volo?
Foam avy amin'ny alam-baravarankely
Ahoana no fomba hamadian'ny lehilahy ny virjiny?
Inona no hanomezana sakafo sharieja?
Volo fotsy hoditra ho an'ny fampakaram-bady